Kooxaha Arsenal Iyo Sunderland Oo Dhibcihii Ku Qaybsaday Stadium Of Light, Gunners Oo Iska Lumisay Fursad Ay Kaalinta Saddexaad Ku Soo Gali Kartay Iyo Black Cats Oo Kaalmaha Lagu Hadho Ka Soo Baxday | Haqabtire News
Kooxaha Arsenal Iyo Sunderland Oo Dhibcihii Ku Qaybsaday Stadium Of Light, Gunners Oo Iska Lumisay Fursad Ay Kaalinta Saddexaad Ku Soo Gali Kartay Iyo Black Cats Oo Kaalmaha Lagu Hadho Ka Soo Baxday
Kooxaha Sunderland iyo Arsenal ayaa bararo gool la’aan ah ku galay garoonka Sunderland ee Stadium of Light waxayna Gunners iska lumisay fursad ay kaalinta saddexaad ee premier Leaque-ga ay ugu soo laaban kartay halka Sunderland ay heshay dhibic muhiim ah oo ay kaga soo baxday saddexda kooxood ee ugu sareeya iyada oo farqiga goolasha kaga sare martay kooxda Norwich City.
Kooxda Sunderland ayaa soo dhawaysay Arsenal, waxayna Black Cats kulankan ciyaarayeen iyaga oo doonayay in ay sii wataan dagaalka ay ugu jiraan in ay xili ciyaareedkooda badbaadsadaan oo ay ka baxsanaad in ay ka hadhaan Premier Leaque-ga halka Gunners ay doonaysya in ay dib ugu soo laabto kaalinta saddexaad.
Labada kooxood ayaa ku soo galay shax la mid ah shixihii ay ku ciyaareen kulankoodii ugu danbeysay ee horyaalka Premier League, laakiin warka ugu weyn ayaa ahaa in Jack Wilshere uu ku soo laabtay kursiga keydka kooxda Arsenal. Danny Welbeck iyo Francis Coquelin ayaa iyagana weli ku jiray kursiga keydka iyadoo Oliver Giroud iyo Ramsey ay boosaska kala baxeen isbuucii labaad.
Sunderland(4-1-4-1):Mannone, Yedlin, Van Aanholt, Kaboul, Kone, Kirchhoff, M’Vila, Cattermole, Borini, Khazri, Defoe
Kayd: Pickford, Jones, Larsson, Rodwell, N’Doye, O’Shea, Watmore.
Arsenal (4-2-3-1): Cech, Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Elneny, Ramsey, Iwobi, Ozil, Sanchez, Giroud
Kayd: Ospina, Gabriel, Coquelin, Wilshere, Campbell, Walcott, Welbeck
Qaybta hore ee kulankan ayaa ahayd mid ay labada kooxoodba abuureen fursado badan oo goolal lagu dhalin karay gaar ahaan Arsenal ayaa si joogto ah u abuuraysay firsado fiican laakiin dhamaystirka goolka ayaa labada kooxoodba dhibaato ku ahayd iyada goolhayhaa Sunderland ee Mannone uu door wayn ku lahaa inuu kooxdiisa ka badbaadiyay furso halis ahaa.
Daqiiqadii 4 aad ee bilawgii ciyaartaba Alex Iwobi ayaa fursadii ugu fiicnayd ee Arsenal helay laakiin darbadiisa ayaa bartilmaameedka wayday, waxayna labada kooxoodba bilaabeen in ay weeraro isku qaadaan. Ciyaarta ayaa noqotay mid si xoogan loogu dagaalamayo waxayna koox kastaaba raadinaysay goolka furitaanka.Defoe ayaa sidoo kale halis ku ahaa goolka Gunners.
Arsenal ayaa bilawday in ay kubbada maamusho isla markaana ay Sunderland difaaca dib ugu degto, waxaana daqiiqadii 20 aad darbo fog goolka Sunderland ku tuuray Mohamed Elneny laakiin goolhaye Mannone ayaa si sahlan ku badbaadiyay.
Daqiiqadii 21 aad Sunderland ayaa aad ugu dhawaatay in ay ismari waaga jabiso kadib markii uu Patrick Van Aanholt uu si fiican u garaacay Petr Cech isaga oo darbo laaga xorta ah ka soo tuuray meel ka baxsan xerada ganaaxa Arsenal laakiin darbadiisa ayaa birta goolka ka soo booday. Alla maxay Arsenal markan sigatay!.
DAQIIQADII 34 aad Alexis Sanchez ayaa ku dhawaaday in uu Gunners u keeno goolka furitaanka kadib markii uu cidhifka xerada ganaaxa Sunderland uu ka tuuray darbo laaga xorta ah ku timid, laakiin kubbada goolka sii galaysay ayuu goolhaye Mannone dirki iskaga badbaadiyay, waxayna ahayd fursad aad u halis badnayd.Sidoo kale Iwobi ayaa marar dhawr ah helay fursado fiican laakiin isla goolhaye Mannone ayaa fursadihiisa beeniyay.
DAQIIQADII 36 aad Sunderland ayaa ku dooday in ay heleen gool ku laad cadaan ah kadib markii uu Defoe uu darbo ku tuuray goolka Arsenal isaga oo waliba ku dhex jiray xerada ganaaxa Gunners laakiin waxaa darbadiisa gacanta ku joojiyay Mertesaker laakiin garsoore Mike Dean ayaana waxba tilmaamin inkasta oo uu Mertesaker si cadaan ah gacanta ugu dhuftay kubbada.
DAQIIQADII 41 aad Arsenal ayaa markooda ku dooday rekoodhe cadaan ah kadib markii uu Iwobi bartilmaameed saday goolka Sunderland laakiin markale Yedlin ayaa darbada Iwobi gacanta ku celiyay balse markale garsoore Mike Dean ayaa isku indho tiray rekoodhe cadaan ah. Ma qaladkii hore ee uu sameeyay ayuu qalad kale ku saxay?. Labada rekoodhe ayaa ahaa wax cadaan ah oo aanu shaki ku jirin balse Mike Dean ayaa ku fashilmay in uu wax tilmaamo.Qaybta hore ee ciyaarta ayaana lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Sunderland soo laabtay iyad aoo ku socota dardar cajiib ay waxayna markiiba weeraro dhul gariir ah ay ku bilawday goolka Arsenal laakiin goolhaye Petr Cech ayaa kooxdiisa ka badbaadiyay goolal cadaan ah.
DAQIIQADII 50 aad Sunderland ayaa heshay laba fursadood oo CAJIIB AH waxaana marka hore kubbad gantaal ah goolka Gunners ku bartilmaameedsaday Jermain Defoe laakiin darbada xoogan ee Defoe waxaa dirqi iskaga soo celiyay Petr Cech laakiin kubbada Cech ka soo booday ayuu markale sii raacay Yann M’Vila kaas oo udhawaaday in uu goolka dhaliyo balse Cech ayaa markale badbaadiyay darbada goolka loo fishay.
Wax kastaaba waxay noqdeen Sunderland oo weerar ah isla markaana fursado aan la rumaysan karin iska luminaysa iyo Arsenal oo iswayday isla markaana lumisay kaantaroolkii ciyaarta ee qaybta hore. Markale Cech ayaa badbaadiyay darbo uu lugta midig ku tuuray M’Vila si uu kooxdisia ciyaarta ugu sii hayo.
DAQIIQADII 64 aad Sunderland ayaa markale heshay fursad cajiib ah kadib markii kubbad dheer loo soo tuuray Jermain Defoe kaas oo markiiba kubbada ka dulqaday difaaca sidoo kale kubbada ayaa dhaaftay Cech oo soo baxsanaa laakiin nasiib wanaaga Gunners kubbada ayaa goolka oo banaan wax yar u martay.
Arsenal Wenger ayaa markii uu yaabay isla markaana kooxdiisa dhibaato badan lagu abuuray kaydka uga yeedhay Theo Walcott iyo Danny Welbeck wuxuuna ciyaarta ka saaray Alex Iwobi iyo Olivier Giroud waxayna Arsenal bilawday in ay dib isku soo habayso isla markaana ay fursad abuuris raadiso.Ciyaarta ayaa noqotay mid xiiso badan iyada oo ay labada kooxoodba goolka si wayn u raadinayeen.
DAQIIQADII 82 aad Danny Welbeck ayaa darbo xoogan ka tuuray meel ka baxsan xerada ganaaxa Sunderland wuxuuna ku dhawaaday in uu goolka furitaanka ee kulankan uu dhaliyo laakiin waxaa darbadiisa si fiican u joojiyay goolhaye Mannone.
DAQIIQADII 84 aad Wenger ayaa kaydka ka soo kiciyay xidiga muddada dheer maqnaa ee Jack Wilshere kaas lagu soo badalay Mesut Özil.Wilshere ayaa kulankiisii ugu horeeyay ee xili ciyaareedkan u saftay kooxdiisa waxaana ugu danbeeyay finalkii FA Cupka ee xili ciyaareedkii hore. Wuxuuuna kooxda kowaad ka maqnaa 330 maalmood.
DAQIIQADII 87 AAD Arsenal ayaa u muuqatay in ay ugu danbayn heshay goolka dhibaatada ku noqday kadib markii uu Alexis Sanchez kubbad ka farsamaystay difaaca Sunderland isla markaana uu darbo xoogan ku tuuray goolka Black Cata laakiin goolhaye Mannone ayaa markale sameeyay badbaadin layaableh.
Dhamaadkii ciyaarta labada kooxood ayaa si deg deg ah ku raadinayay goolka guusha laakiin ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamatay barbaro gool la’aan ah waxayna Sunderland sidaa ku heshay dhibic xili ciyaareedkeeda muhiim u ah.Arsenal ayaa iska lumisay fursad ay kaalinta saddexaad ugu soo laaban kartay waxayna baaqi ku sii tahay kaalinta afraad iyada oo Manchester City ay kaalinta saddexad ugu jirto farqiga goolasha.